နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်တန် အသုံးမဝင်မှု
စ, စချင်းတုန်းက "အဲ့နေရာမှာ ကြေးခေတ် (Bronze Age) တုန်းက သင်္ချိုင်းတခုရှိတယ်" ဆိုတော့ အံ့သြမိတယ်။ စာတွေ ပေတွေထဲမလည်း မဖတ်ဖူးဘူး၊ သမိုင်းနဲ့လည်း အဆက်ပြတ်၊ ရှေးဟောင်းပညာနဲ့ကလည်း ဝေးလေတော့ ပုံတောင်၊ ပုံညာလောက်ကိုပဲ စာထဲ တွေ့ဖူးတာ။ ကြေးခတ်သင်္ချိုင်းဆိုတာ ရှိပါ့မလားပေါ့ ...
သာသနာပြုနေသော ဘုန်းတော်ကြီး နေရီနီ (Fr. Paolo Nerini) နှင့် ကိုရင် ကာပဲလို (Br. Angleo Cappello) တို့သည် စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆေးခန်းဖွင့်ခွင့်ကုုိ ဗညားဒလထံမှာ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နေရီနီမှ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရာ အာမေးနီးယန်းကုန်သည် နီကိုးလတ် ဒီ အာကွီလာ (Nicolas de Aquilar) က ငွေလှူဒါန်းခဲ့သည်
Facebook ပေါ်က သတင်းဌာန အယောင်ဆောင်များ
အစိုးရကိုယ်တိုင်၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း သတင်းဌာနတွေကို မဖြတ်သန်းစေဘဲ ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအားပြုပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တွေ လုပ်ခဲ့၊ အတည်ပြုချက်တွေ လုပ်ခဲ့တော့ လူတွေက Facebook ကို အမှန်ထင်၊ အတည်ယူလာကြတယ်။
ယူဂန်ဒါက ငှက်ပျောသီးနဲ့ ဧည့်သည်များ
တနေ့တုန်းက ယူဂန်ဒါနိုင်ငံက လွှတ်တော်အမတ်တယောက်နဲ့တွေ့တော့ စကားပြော မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်က သတင်းထောက်ဆိုပြီး မိတ်ဆက်တော့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ သူမှာ ပြောစရာတွေ တပုံတပင်ပဲတဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း စိတ်ဝင်စားသတဲ့ ...
ယန်းပေါဆတ် အင်တာဗျူးနဲ့ မြန်မာပြည်က သတင်းသမား
အရင့်အရင် ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ Jean Paul Sartre ကို ယန်းပေါဆတ်လို့ ပြန်တယ်။ ဆရာမြင့်သန်းကတော့ ယန်ပေါဆာရ်ထာ ဆိုပြီး ပြန်တယ်။ ကျနော် ပြင်သစ်တွေကို အဲ့ဒီနာမည် မေးကြည့်တော့ ဒုတိယတခုက ပိုနီးစပ်တာ တွေ့တယ်။